Saina fotsy: Misaona ny Sri Lankey · Global Voices teny Malagasy
Ampiasaina haneho fisaonana ao Sri Lanka ny loko fotsy
Voadika ny 03 Mey 2019 5:47 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Ελληνικά, Italiano, Shqip, Español, македонски, नेपाली, English
Taorian'ny fipoahana baomba tamin'ny alahadin'ny Paska, nanangana saina fotsy teny rehetra teny, teny ivelan'ny tranony, any teny amin'ny toerana ho an'ny daholobe sy ny fiarany ny olona. Nampiasaina ny loko fotsy mba hanehoana ny fisaonana any Sri Lanka. Sary avy amin'ny GroundViews.
Ity lahatsoratra nosoratan'i Amalini De Sayrah ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny tranokalan'ny Groundviews, tranonkala fampitam-baovaon”olo-tsotra efa nahazo loka tao Sri Lanka. Navoaka etsy ambany ny dika nasiam-panitsiana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty amin'ny Global Voices.
Namono olona an-jatony nivavaka tamin'ny Alahadin'ny Paska 21 aprily 2019 tany Sri Lanka ny andiana daroka baomba nomanina. Anisan'ireo toerana enina lehibe voadaroka baomba ny fiangonana telo: ny fiangonana St. Anthony ao Kotahena, St. Sebastian ao Katuwapitiya sy ny Fiangonana Ziona ao Batticaloa. Nangonina tamin'ny 22 Aprily, iray andro taorian'ny fanafihana ny sary sy ny resadresaka manaraka.
Fiangonana St. Anthony, Kochchikade. Sary: GroundViews. St. Anthony’s Church, Kochchikade. Image via GroundViews.
Saina fotsy sy mainty mihofahofa ambonin'ny masoandro mingaingaina eo ambanin'ny vahoaka nitangorona teo amin'ny sakan-dalana ara-piarovana manodidina ny fiangonana St. Anthony ao Kochikade, Kotahena (Colombo 13)
Nangovitra ny famantaranandro tamin'ny 8:45 hariva. Sary avy amin'ny GroundViews.
“Jereo ny famantaranandro?” hoy ny lehilahy iray nandalo, “nangovitra izy tamin'ny 8:45, raha nipoaka ny baomba”
Ny toerana masina katôlika malaza no voalohany tamin'ireo andiana daroka baomba nipoaka tamin'io andro io. Manjelatry ny masoandro ireo korontan-javatra tamin'ny fipoahana – vakim-pitaratra nanarona ny sarivongana lehibe teo amin'ny tarehin'ny fiangonana, ary ny fitaratra fiarovana teo amin'ny varavarana lehibe – raha mandeha eny amin'ireo korontan-trano rava ny polisy, ny tafika ary ny mpitsabo.
Mpisaona mitangorona. Sary: Grounviews
Tonga eto ny rehetra mba hivavaka, na ny akaiky na ny avy any lavitra. Iza no hanao zavatra tahaka izany amin'ny toerana masina toy izao
Miorina ao Kotahena, tanàna itatry ny renivohitr'i Sri Lanka, nanjary toeran'ny mpitsoa-ponenanana ho an'ny finoana rehetra ao Sri Lanka ny toerana masina. Marobe ireo alahelo taorian'ny fipoahana.
Manantona saina fotsy. Sary: GroundViews
Nanampy nanaisotra ireo vatana mangatsiaka aho nandritra ny tontolo andro, nanomboka tamin'ny 9 maraina hatramin'ny 6 ora hariva. Nibata sy nametraka azy ireo tany amin'ny trano-paty izahay. Misy fotoana ianao tsy mahatadidy ny isa.
Nofatorana fehilamba ny tongony ary ningainy mba hampisehoana ny ratra eo amin'ny faladia. Nandratra azy ny fantsika tamin'ny tany raha niezaka nanampy tamin'ny fanavotana ireo niharam-boina tamin'ny daroka baomba izy sy ny hafa. Nianjera izy noho ny fahaverezan-drà tamin'ilay ratra ary tsy maintsy navoakan'ny polisy izy, nofatorana ny tongony naratra ary niverina nanampy izy avy eo.
Miatrika ny fiaretan-tory. Sary: GroundViews
Tsy te-hino izany akory aho…ny ankizy kely…ny vehivavy. Tsy nieritreritra momba ny fiafaran'ny fiainana tampoka toy izany isika.
Niditra tamin'ny antsipirihan-tsary momba ireo vatana mangatsiaka hitany tamin'io andro io izy, nanao fihetsika tamin'ny tanana miaraka amin'ny vatany sy ny ratsan-tanany manokana mba hanondroana ny fahasimbana. Maro tamin'ireo fiarahamonina samy manana ny finoany no tonga niaraka mba handefa ireo olona hotsaboina vonjimaika any amin'ny hopitalim-panjakana Colombo ary hitatitra ireo vatana mangatsiaka any amin'ny trano-patin'i Colombo.
Rariny fa tsy ny valifaty. Sary avy amin'ny Groundviews.
Nandray anjara tamin'ny fiareta-tory kely nokarakarain'ny vondron'olon-tsotra mahaleotena, izay natao tao amin'ny tsangambaton'ny jobily 150 taona, atsimon'ny toerana masina ihany koa ilay lehilahy. “Rariny, fa tsy valifaty”, hoy ny vakin'ny sora-baventy, ary misy ireo labozia mirehitra manohitra ny rivotra mitsoka. Adiny iray mahery taty aoriana, dia nipoaka ny kamiao kely iray nijanona teo akaikin'io toerana io raha nandrava baomba hita tao anatin'izany ny ekipa mpandrava baomba avy ao amin'ny Vondron-tafika manokana – Special Task Force (STF) manokana.
Saina fotsy eny rehetra eny. Sary: Groundviews
Tsy mieritreritra izahay raha olona fantatray, na olona monina akaiky anay. Mamatotra ireo saina ireo ho an'ireo rehetra namoy ny ainy izahay.
Mamatotra saina. Sary: Groundviews
Feno tady fisaonana mainty sy fotsy ny tanany. Vondrona lehilahy marobe monina ao amin'ny manodidina no mamatotra azy ireo manerana ny Arabe Jampettah, arabe feno olona mifanitsy amin'ny fidirana ao amin'ny fiangonana.
ireo mpiambina ny fiangonana. Sary: Groundviews
Notontosaina tamin'ny fiteny Sinhala sy Tamil ny fivavahana amin'ny 8 ora maraina. Olona avy any ivelan'ireo tanàna ireo no ankamaroan'ireo tonga nanatrika. Avy eo nitranga ny fipoahana.
Nilaza ny mpivady monina ao amin'ny faritra fa matetika ankalazaina amin'ny teny Sinhala ny lamesan'ny Paska amin'ny 8 ora maraina. Tamin'ity taona ity, dia natao tamin'ny teny Tamil ny sasakalin'ny Asabotsy, ary nanatrika izany ny ankamaroan'ny mpivavaka avy amin'io faritra io.
Periyamulla. Sary: GroundViews Periyamulla.
Saina fotsy mirazorazo manerana ny arabe tsy dia misy olona, ary mbola mikatona ireo tsena sy trano fisakafoanana taorian'ny nanesorana ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina.
Masikiriny Lehibe Negombo. Sary: GroundViews
Matahotra ny amin'ny fiarahamoninay ihany koa izahay, ary tianay ho fantatry ny firenena fa mitsipaka ny zava-nitranga ihany koa izahay. Tsy manohana izany ny Miozolomana
Faritra Miozolomana. Sary: Groundviews
Milaza ireo mpitarika masikiriny fa niharan'ny fanafihana nataon'ny havanan'ireo olona maty tamin'ny fipoahana alahady ny fianakaviana Pakistaney. Nanafika sy nitora-bato ny tranon'izy ireo, namaky ny varavarankely tamin'ny vato izy ireo. Mpitsoa-ponenana izay samy ao amin'ny fiarahamonina Miozolomana Ahmadi na ny finoana Kristiana izay mandositra ny fanenjehana any Pakistana ireo fianakaviana ireo. Nanatona ny polisy Negombo avy eo ireo fianakaviana ary nangataka ny hametrahana fiarovana eo an-toerana – fangatahana izay nolazain'ireo mpitarika fa neken’ ny polisy.
Mivavaka ao amin'ny masikiriny. Sary: Groundviews
Manao vavaka in-dimy isan'andro izahay. Tsy fotoana mahazatra anay amin'ny vavaka izany. Fa vavaka manokana, vavaka fisaonana
Ao anatin'ny masikiriny lehibe Negombo, natao ny janazah na ny vavaka fandevenana. Rehefa vita ny famaranana dia miangona manodidina ny tranovorona ny vahoaka ary hoentina mivoaka izany, ka omena ora vitsy ny vondrom-piarahamonina mba hanao ny fiarahamioriny farany.
Milanja vata-paty ho an'ny vavaka janazah. Sary avy amin'ny GroundViews
13 taona izy. Katolika ny reniny ary Miozolomana ny rainy, ka nandeha niangona izy tamin'ny alahady. Izany no fiarahamonintsika, mifangaro sy mifamatotra isika.
Misy vondrona vehivavy kristianina koa tonga tao amin'ny masikiriny; Mivavaka izy ireo ary manonona ny fizarana voalohany amin'ny rozery manerana ny vatana alohan'ny hitondrana azy any amin'ny fandevenana. Nilaza ireo vehivavy ao amin'ny trano manodidina fa monina ao amin'ny faritra manodidina ny fiangonana Katuwapitiya ireo fianakaviana miozolomana.
Saina fotsy ao Katuwapitiya. Sary: GroundViews
Saina fotsy mihofahofa eo ambanin'ny lanitra malomaloka. Milahatra eny amin'ny arabe teritery ny miaramila sy ny polisy, ary miezaka mijery ny zava-mitranga manodidina azy ireo fiara misy mpisaona sy ny mpandeha tongotra
Ny lalana Katuwapitiya. Sary avy amin'ny Groundviews.
Nisy ny fandevenana nitranga tamin'ireo trano vitsivitsy, saika tamin'ny ankamaroan'ny lalan-kely rehetra
Ahitana trano misaona manamorona ny arabe Katuwapitiya. Mampiseho ireo sora-baventy ivelan'ny trano fa maty tamin'ny fanapoahana baomba tao amin'ny fiangonana St. Sebastian ny fianakaviana manontolo, na olona maroaro tao amin'ny fianakaviana iray.
Miaramila miambina lalana. Sary avy amin'ny GrouncViews
Olona eo akaikin'ny fiangonana. Sary: GroundViews
Jereo fa mifanakaiky amin'ny tranon'izy ireo ny fiangonana. Azo antoka fa dia tongotra vetivety mandeha sy miverina izany. Ahoana no ahafantaran'izy ireo fa hitsahatra tahaka izany ny dian'izy ireo tamin'io andro io?
Saina fotsy marobe. Sary: Groundviews.
Nanomboka natao ny lamesam-pandevenana, ka maro ireo vatana mangatsiaka niala ny fiangonana ho alevina any amin'ny fasana ao Negombo. Nodiovina ny tany iray malalaka mba hametrahana ireo trano vorona maromaro mila toerana malalaka.
Nivoaka ny fanambarana momba ireo nanao ny fanafihana, ary miha- mahasosotra kokoa ireo fanehoan-kevitra ara-politika avy amin'ireo tompon'andraikitra ambony indrindra ao amin'ny firenena, saingy mbola mitohy mandritra ny andro vitsy manaraka ny fandevenana. 253 ankehitriny no notaterina fa fitambaran'ny namoy ny ainy vokatry ny fanafihana tamin'ny 21 Aprily ary mbola miakatra hatrany izany isa izany.